Soomaalida soo gashay baarlamaanka Sweden | Somaliska
Doorashadii Sweden ka dhacday axadii la soo dhaafay waxay ahayd mid taariikhii ah marka laga hadlayo tirada musharaxiinta Soomaalida ee u sharaxnaa in ay soo galaan baarlamaanka Sweden. 23 musharax ah oo Soomaali ayaa ka qeyb qaadatay doorashada balse tirada soo gashay ayaa noqotay mid aad u yar.
Xildhibaanada Soomaalida ee ilaa hada soo galay baarlamaanka ayaa ah hal qof oo keliya.
Ugu horeyn waxaa baarlamaanka markale kursi ka helay Amir Adan oo ka tirsan xisbiga Moderaterna (M). Amir ayaa ka mid ahaa xildhibaanada Soomaalida ee horay ugu jiray baarlamaanka isagoo hada sii wadaya shaqadiisa. Xisbiga Moderaterna (M) ayaa guud ahaan 10 kursi ka helay magaalada Stockholm, iyadoo Amir uu safka kaga jiray nambarka lixaad.
Dhinaca kale, waxaa jidha tiro fiican oo Soomaali kuraas ka helay golaha degmooyinka Sweden, mowduuc kale ayaan ku eegi doonaa dadka kuraasta ka helay degmooyinka iyo gobolada.
Haddaan nahay bahda Somaliska waxaan leenahay Amir iyo Mursal hambalyo iyo shaqo wacan.
Koleey iyo koleey wax qabad muuqda ee dadkooda u qabteen weli ma haye
Sawirka Amir Adan. Maxaad uga saartay jimcaale?
Sorry Sawirka ilka case wayaan kawadaa mise qoraalka ayaa qaldamay?
Haa, qoraalka ayaan saxay.
ka dib waxaa is weydiin mudan oona ka muhiimsan soo galintaankoosa barlamaanka qowmiyada Somalida ee dalkan Sweden maxay ka bedeli karaan ama kusoo kordhin karaan madama tusaala walba oo xun lagu soo qaato Somalida dadka xumaanta lagu tillmaamo ay ayagu yihiin, malaga yaabaan iney mideeyaan Somalida oo qobol jaaliyadood qabiil ku dhisan leh iyo xumaanta lagu tir tiray Somalida maka tir tiridoonaan mise weykusii tir tiri doonaan. maxay u qaban doonaan Umada Somaliyeed.